Golaha Wasiirada Xukuumada Somalia oo Fariin Xasaasi ah u diray Soomaalida kunool Magaalada Nairobi. - jornalizem
Golaha Wasiirada Xukuumada Somalia oo Fariin Xasaasi ah u diray Soomaalida kunool Magaalada Nairobi.
Gollaha Wasiiradda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay sugu yimid shir aan caadi ahayn, iyadoo uu shir guddoominayay Kusimaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Kheyraadka Dalka mudane Cabdirisaq Cumar Maxamed waxaana shirka looga hadlay Arrimaha Amniga dalka iyo weerarkii Argagaxisadu ka gaystay goob laga dukaamaysto oo ku taala magaalada Nairobi iyo.
Ugu horayntii Golaha Wasiirada waxay tacsi tiiraanyo leh u direen Ehelkii iyo Qaraabadii uu ka geeriyooday Marxuum Xuseen Cabdislaam oo ka tirsanaa golaha Baarlamaanka oo shalay kooxo hubaysin ku dileen xaafada Buulo Xubeey.
Dhanka kale ku simaha Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in kooxda nabad diidka ah looga adkaan karo oo kaliya in shacabka iyo dowladu wada shaqeeyaan.
“Alshabaab ugxantooda waxay taalaa Soomaaliya, waxaana looga adkaan karaa iyadoo lagu taageero dowladda Soomaaliya qorshaha ay u dajisay la dagaalankooda, waana in iskaashi dhan kasta ah laga sameeyo sidii loola dagaalami lahaa kooxdaan” ayuu yiri kusimaha Ra’iisul Wasaaruhu
Markuu soo idlaaday shirka ayaa waxaa saxaafada la hadlay wasiirka Gashaandhiga mudane Cabdixakiim Xaaji Fiqi isagoona faahfaahin ka bixiyey qodobada shirka looga hadlay
“Xukuumadda Soomaaliya iyo Shacabkeeda oo isku duubaan waxay aad u cambaaraynayaan weerarkii axmaqnimada ahaa ee lagula kacay dadka shacabka ah, waxayna tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaski iyo qaraabadii dadkoodu ku wax yeeloobeen weerarkaas, waxay sidoo kale xukuumadda Soomaaliya u muujinaysaa dowladda Kenya sida ay u gabar taagan tahay ulana qaybsanayso murugada ka dhalatay weerarka waxashnimada ah ee ay soo qaadeen kooxda argagaxisada Alshabaab oo caado ka dhigtay in ay bartilmaameedsadaan dadka nugul oo an hubaysnayn” Ayuu Yiri wasiirka gaashaandhiga oo dhanka kalana xusay in khatarta joogtada ah ee ay ku hayaan kooxaha nabad diidka ah Soomaaliya iyo dalalka dariska ah. Waxayna u muuqataa mid ku sii fidaysa caalamka intiisa kale, wayna adagtahay in laga hortago hadii aan si dhab ah dowlada Soomaaliya loogu taageerin dhismaha ciidamada qalabka sida.
Sidoo kale golaha wasiirada ayaa ka dooday dhibaatooyinka ka dhalan kara weerarada noocaan ah, waxayna soo jeediyeen talooyin ku aadan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya. Waxaa kale oo golaha Wasiiradu go’amiyeen:
· In loo diro Kenya Wafti heer wasiir ah oo qaada dhambaalka shacabka iyo kan dowladda, si loogu muujiyo shacabka iyo dowlada Kenya sida ay ula qaybsanayaan dhibaatada dhacaday.
· In loo tacsiyeeyo dowalda Kenya iyo dowladaha kale ee ay dadkoodu ku dhinteen
· Waxaa Goluhu Baaq u dirayaa shacabka Kenya, iyadoo loo muujiyanayo in Argagaxisada caalamka aysan u kala socnayan dhibaataynta shacabka aan waxba galabsan wadankuu doono ha u dhashee.
· In iskaashi dhan kasta ah laga sameeyo sidii loo wiiqi lahaa awooda kooxaha Argagaxisada ah.
· In shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya is dajiyaan, una muujiyaan wada shaqayn buuxda dowladda iyo shacabka reer Kenya
Golaha wasiirada ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha amniga iyagoona soo dhaweyey guulaha ay gaareen ciidamada qalabka sida iyo goobhii ay dhawaan kala wareegeen kooxaha nabad diidka ah. Waxay sidoo kale Goluhu baaq u direen Hay’adaha samafalka inay la soo gaaraan dawooyin iyo cunto dadka ku waxyeeloobay fatahaada Wabiga oo khasaaro xoogan gaarsiiyey tulooyin ku xeeran magaalada Jowhar